Umnatha weentaka ezichasene nentaka, iPond Netting, iGarden Netting Mesh - Iigusha ezintathu
Khusela igadi yakho- Musa ukulinda izinambuzane, amaxhama kunye neentaka ukuze ziphange igadi yakho. Khusela iintyatyambo zakho, iziqhamo, amajikijolo kunye nemifuno kwaye ulibale ngabangeneleli ngonaphakade. Kulula ukuyifaka, iyasebenza kwaye ikhuselekile, ihlala ixesha elide kakhulu kwaye ihlala iminyaka. Ubume benkxaso yobungqina beentaka benza ukukhanya kunye nokufuma kufikelele kwiziqhamo nakwizityalo. I-100% yentsha kunye nomgangatho ophezulu. Material: PE enemingxuma Ubungakanani: 10mm x 10mm, 12mm x 12mm, 15mm x 15mm, 20mm x 20mm, 25mm x 25mm, 40mm x 40mm Umbala: Green, Mnyama ...
Iminatha yeentaka ezichongiweyo yenziwe kwi-HDPE monofilament kwaye inikezela ngokhuseleko lwexesha elide kuzo zonke iintlobo zezityalo kunye nezityalo ngokuchasene nazo zonke iintaka nezilwanyana. Uluhlu lobubanzi luyafumaneka ukuya kuthi ga kwi-20m yeendawo ezinkulu. Ukulindelwa kobomi bomnatha yiminyaka emi-4-6, kuxhomekeke kwimeko yokusetyenziswa. Le mveliso inokusetyenziswa ngokudibeneyo neekheji zeziqhamo, ukugubungela uphahla kwaye ingasetyenziselwa ukugubungela amachibi ukukhusela iintlanzi kuhlaselo lwengqolowa ngelixa kugcinwa amagqabi. Isixhobo: Ubungakanani be-Mesh Ubungakanani: ...
Umnatha okhuselayo wezityalo zasegadini uyilelwe ukukhusela igadi yakho kunye nokubekwa komhlaba kwiinyoni, kwizilwanyana nakwabanye abangeneleli. Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo. Isiqhamo seCage yoKhuseleko lweMesh Item Inani Ubungakanani beMesh Ubungakanani TGS-SL-110 1x8m 10X10mm TGS-SL-210 2x4m 10X10mm TGS-SL-21619 2x16m 19x19mm TGS-SL-23219 2x32m 19x19mm TGS-SL-210019 2 × 100 19x19mm TGS 215019 2 × 150 19x19mm Igolide umnatha into Inani Ubungakanani enemingxuma Ubungakanani TGS-SL-7100 7'x100 '1/4' 1/2 ...
I-ertyisi kunye ne-Bean Netting kukhutshiwe umnatha we-polyethylene mesh, inkxaso yeembotyi zembaleki, i-ertyisi, i-ertyisi eziswiti kunye nezinye izityalo ezinyukayo-ngeembotyi zembaleki ingakumbi ezixhamla kumnatha xa zigqunywe ngaphezulu kwesakhelo. Yenziwe nge-PE, umnatha unokubuyisela umnatha wesinyithi, igridi yentsimbi kunye nezinto ezinokutsha. Ihlala ixesha elide, ilula kodwa yomelele kwaye inokusetyenziswa kwakhona ukusuka kwelinye ixesha ukuya kwelilandelayo, kulula ukuyifaka kunye nokumelana nezenzi zangaphandle. Lo mnatha unceda ukuxhasa izityalo ezinyukayo ...
IPlastikhi yaseGadini iTrellis Mesh yindawo ekhutshiweyo yeHDPE UV umngxunya wesikwere iTrellis ilungele ukuxhasa izityalo ezinyukayo, okanye ukhuseleko lwegadi. Yindlela elula engasetyenziswanga kwi-wood trellis kwaye i-UV ikhuselwe ukuze ihlale ihleli. Ungayisebenzisa le trellis mesh njengendlela yokwenza uthango lwenja okanye ucingo lwenkukhu. okanye ubiye ucingo oluqhuba abantwana. Yibeke ukuze ugcine abantwana kude nedama lakho kunye nezinye iindawo ezingathandekiyo eyadini yakho. Ucingo lwethu lweplastikhi lubiyelwe ngobukhulu bemingxunya ...
Umngxunya wokugada umngxuma, iplastikhi yomngxunya wokugubungela umnatha igubungela oonogada bokugada ukuqengqeleka ngamagwegwe amagqabi emvula, Ukusetyenziselwa izixhobo kunye noPhuculo lwaseKhaya-Isetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zasemanzini, ukufuya iinkukhu, isenzo sendalo, ulwakhiwo loluntu, ulondolozo lwemveliso yasemanzini, igalufa yegadi ukukhusela ikhosi. Gutter Guard Mesh Cover Material: PP / PE Umbala: Ubungakanani oMnyama: 16 ft x 6in, 20 ft x 6in, 20ft x 7.1in, 2mm Ukutyeba Luhlala, Flexible enemingxuma Ngaba ngokulula Unroll & Sika ubude With Sci ...
Umnatha webhabhathane owenziwe nge-HDPE eyomeleleyo kunye ne-UV izinzile, ivakalelwa ngakumbi njengelaphu elithambileyo lokuchukumisa kwaye liya kuhlala iminyaka emininzi. Ukukhanya ngokwaneleyo ukuze kungqengqeleka ngqo kwizityalo kwaye komelele ngokwaneleyo ukuba kungasetyenziselwa ukugubungela izakhelo, iikheyiji okanye iihupula. Isebenza njengesithintelo emzimbeni phakathi kwezityalo kunye namabhabhathane ebathintela ekubekeni amaqanda abo kwaye, imibungu itya izityalo. Kwakhona luncedo ekukhuseleni amachibi ekungcolisweni kwezinto kunye neHerons. Ubungakanani enemingxuma 6mmx6mm Package: Baled okanye Rolls kunye ibhegi PE ...
Ilaphu lethu elinithiweyo lenzelwe kwaye lakhiwa ukuvumela ukuhamba komoya kukugcine upholile kwaye uza kuluhlu lwezinto zokugubungela, ukuze ufumane ngokulula into efanelekileyo kwiimfuno zakho. Ilaphu loMthunzi lisetyenziswa ikakhulu kwizicelo ezinxulumene nokukhuselwa kwezityalo kunye nezolimo. Iipesenti ezingama-35% -100% zomthunzi ziyafumaneka kuluhlu lwemibala efana nomhlophe, mnyama, mdaka, tyheli, bomvu, naluhlaza Yenziwe kwi-UV ezinzileyo iHDPE Yomelele, yomelele kwaye iyamelana nokukrazuka nokubola Ifumaneka nge-1m- 12m ububanzi, ubude njengesicelo seTape + Ta ...
Iscreen sokuBiyelwa kwesikrini esenziwe ngezinto zeHDPE, amacala amane agqityiwe ngezinto eziqinisiweyo kwaye agqityiwe ngegrommets kuwo omane amacala, emva koko apakishwa kwaye athunyelwa alungele ukufakwa. Ilaphu lizinzile i-UV ukuze likwazi ukuxhathisa ukuphela kwaye ligcine amandla emveliso iminyaka yokusetyenziswa. Ngaba ngokulula ixhonywe ngeqhina zip ufakelo. Ihlala isetyenziselwa iyadi, iipaki, indawo zokugcina amachibi, inkundla, iminyhadala, ibhalkhoni kunye negadi. Isikrini sokubiya sivumela ukuhamba komoya kunye namanzi ukuba ahambe, abambe ...
I-Anti-hail Net iyilelwe ukugquma imithi ye-apile, iigadi, izidiliya kunye negreenhouse. Ubuninzi be-polyethylene, ezinzileyo kwimitha ye-UV, esetyenziselwa ukuthintela ukonakala kwesichotho kwindidi yezityalo. Kwakhona kunceda ukukhusela imithi kunye neziqhamo kwiintaka ngelixa uvumela ukukhanya kwelanga. Iminatha yesichotho ayilula, iyaguquguquka, kwaye kulula ukuyifaka kunye nokuyikhupha. Isixhobo: Umbala we-PE: Mhlophe, Ubunzima obungafihliyo: 45gsm, 60gsm, 70gsm, 90gsm Iphakheji: Baled / Rolls → Strong, iinyembezi re ...
I-HDPE ye-Olive Net yokuvunwa kweMinquma yenziwe ngobunzima bokukhanya kunye nezinto ezizinzileyo ze-UV ezinzileyo ze-polyethylene. Iminatha ineentlobo ngeentlobo zemeshi ukuze kulungiselelwe iindlela ezahlukeneyo zokuvuna zeminquma neziqhamo. Ingasetyenziselwa ukuqokelela uninzi lweziqhamo ezinje ngama-walnuts, iminquma, iihazelnuts kunye nee-chestnuts ect. Ukuzinza okugqwesileyo ukunqanda ilahleko yokutshintsha okubuyiswayo （Nge-edging kunye ne-perforation, inokubekwa phantsi okanye ixhonywe emthini) Umnatha womnquma ubekwa kwindawo ...
Iwebhusayithi entsha kraca www.3sheepgarden.com
Bathengi abathandekayo, sigqibile ukuvuselela iwebhusayithi yethu. Wamkelekile ukuthumela umbuzo kuthi. Silapha nanini na. Enkosi kunye neZinto ezilungileyo kwimveliso yegadi